दशैँको टीका लगाउन हिडेका पाँच जना कुकुरको टोकाइबाट घाइते!
भद्रपुर, ४ कात्तिक: छाडा कुकुरको टोकाइबाट मेचीनगर–१ का पाँच जना घाइते भएका छन् ।
दशैँको टीका लगाउन बाटोमा हिँड्दै गरेका अवस्थामा उनीहरुलाई विगत तीन दिनयता अलगअलग ठाउँमा कुकुरले टोकेको हो । घाइतेमध्ये आठ वर्षीया सिम्रन तामाङको अवस्था गम्भीर छ । सिम्रनको गालामा कुकुरले टोकेको पशु प्राविधिक दीपक बरालले जानकारी दिनुभयो ।
उनलाई उपचारका लागि धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको बरालले बताउनुभयो ।
प्रकाशित : आइतबार, कार्तिक ०४, २०७५१७:३७
फेरी बक्स अफिसमा धुम मचाउदै बाहुबली प्रभास, यि अभिनेत्री रोमान्स गर्दै!
सौतेनी आमाले दिएको चाउमीन खाँदा दाजुभाईको मृत्यु !